VaKorea Vashanyi Vanoda Guam uye GVB inogamuchira T'way vafambi nenziyo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » VaKorea Vashanyi Vanoda Guam uye GVB inogamuchira T'way vafambi nenziyo
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • nhau • Kuvakazve • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Guam inogamuchira Vashanyi veKorea - kutanga mushure me COVID-19
Guam Visitors Bureau (GVB) uye AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) vakagamuchira ndege yekutanga kubva kuSeoul, South Korea muna 2021 manheru eMugovera manheru.
Ndege yeB737-800 yakasvika ichibva kuSeoul, Korea, uye yakaunza vafambi makumi mashanu nevashanu kuchitsuwa ichi.
Ndege yaishandiswa na T'way, wekutanga mutakuri wenhandare kuti atangezve kuita wenguva dzose basa remhepo kamwe pasvondo rakatanga 31 Chikunguru.
Vatungamiriri vezvekushanya kubva kuGuam Visitors Bureau pamwe chete nemuimbi wemuno achinyemwerera uye gitare rake vakatambira vashanyi vanosvika nendege yeT'way kubva kuSeoul kuenda kuGuam neMugovera.
Guam inzvimbo yechitsuwa cheUS kuMicronesia, muWestern Pacific. Inosiyaniswa nemahombekombe anotonhora, misha yeChamorro, uye mbiru dzekare dzedombo. Guam's WWII kukosha kuri kutaridzika kuHondo muPacific National Historical Park, ayo masosi anosanganisira Asan Beach, yaimbova nhandare yehondo. Chitsuwa cheSpanish chikoloni nhaka inoonekwa muFort Nuestra Señora de la Soledad, pamusoro pebluff muMumac.
T'way Air Co., Ltd., yaimbove Hansung Airlines, inendege yekuSouth Korea inodhura iri muSeongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul. Muna 2018, ndiyo yechitatu pakukura inodhura mutakuri wekuKorea mumusika wepasi rose, yakatakura mamirioni 2.9 evapfuuri vemunyika uye 4.2 mamirioni vafambi vekunze.
Dzimwe ndege dzakazvipira kunanga ndege kubva kuKorea kuenda kuGuam kuburikidza nemwedzi waNyamavhuvhu. Korea Air inozotangazve sevhisi yemhepo svondo rinotevera musi waNyamavhuvhu 6 nemhepo yevhiki nevhiki. Jin Air ichatangawo kaviri-vhiki nendege kutanga muna Nyamavhuvhu 3 naAugust 6.
“Tinofara vatakuri vedu vekuKorea vari kutangazve basa kuGuam. Kuzvipira kwavo ndeimwe nhanho kumberi mukudzoserwa kweindasitiri yekushanya yeGuam uye mukana wekuratidza mweya wedu weHåfa Adai, "akadaro Mutungamiri weGVB & CEO Carl TC Gutierrez. "Tiri kuenderera mberi nekushanda nesimba pamwe nevekutengeserana nevanotishanyira kuti tiratidze tsika yedu yeChamoru uye kusimudzira ruzivo rweKugadzirira kweGuam."
Chirongwa cheKorea Kubhururuka kweMwedzi waNyamavhuvhu:
nzira inofamba nendege kusvika nguva Ndege / Seat Kugona Ndege Nha. maitikiro
t'way Chikunguru 31, 2021 (yekutanga ndege)
Nyamavhuvhu 7, 14, 21, 28, 2021 11: 40 PM B737-800 / 189 zvigaro TW301 1x vhiki nevhiki
Korean Air Nyamavhuvhu 6, 13, 20, 27, 2021 1: 00 AM B777-300ER / 277 zvigaro KE111 1x vhiki nevhiki
Jin Air Nyamavhuvhu 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 2021 2: 45 PM B737-800 / 189 zvigaro LJ641LJ771 2x vhiki nevhiki
The Guam Vashanyi Bureau (GVB) yakarongawo kuuya kwaziso yekugamuchira ndege dzinotangazve mwedzi wese. Ndege dzakabatanidzwa dzinofungidzirwa kupa zvigaro zvinofungidzirwa zviuru mazana matatu nemakumi matatu neshanu kusvika kuGuam kusvika kupera kwaNyamavhuvhu. Zvinopfuura zvigaro mazana matanhatu zvatengeswa kusvika pari zvino.
Guam iri kuyedza zvishoma nezvishoma kudzoka kuve America Yekushanya Ekuenda muEast Pacific Ocean.